Haacaaluu Hundeessaa: "Hammuma na argan natti bu'uun anaaf waan haaraa miti, irra deddeebiin namuudachaa ture" - BBC News Afaan Oromoo
Haacaaluu Hundeessaa: "Hammuma na argan natti bu'uun anaaf waan haaraa miti, irra deddeebiin namuudachaa ture"
Haaromsameera 30 Waxabajjii 2020
Madda suuraa, Marsaalee Hawaasaa
Weellisaa beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa akka Itoophiyaatti Wiixata galgala sa’a 3:30 irratti rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbuu poolisii fi maddeen BBCn dubbisee mirkanneesan.
Magaalaa Finfinnee naannoo kondomiiniyamii Galaanitti rasaasaan dhahame, hospitaala Xinunesh Beejing geeffamus lubbuu isaa baraaruub hin danda'amne.
San booda reeffi isaa gara hospitaala Phaawuloos geeffamee erga qoratamee booda ganama kana gara bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti gaggeeffamaa jira.
Komishiniin poolisii Finfinnee ibsa Wiixata galgala EBC'f kenneen namoota shakkaman muraasa to'annoo jala oolcheera jedhee ture.
Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti yaaliin ajjeechaa irra deddeebiin irratti raawwatamaa akka ture amma dura BBC'tti himee ture.
Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada - Haacaaluu Hundeessaa
Hacaaluun simannaa Obbo Isaayyaas irratti 'ni geerara'
'Jaagamaa Badhaaneefaa nafaana karchallee Amboo ture' Hacaaluu
Onkoloolessa bara 2019 viidiyoo fi odeeffannoon Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa magaala Finfinneetti reebichaaf saaxilame jedhu tokko miidiyaa hawaasummaarra naanna'aa ture.
BBC Afaan Oromoos dubbii kan qulqulleeffachuuf yeroos Wallisaa Haacaalu Hundeessaa dubbisee ture.
Finfinnee keessatti warri 'Namoonni hammuma na argan natti bu'uun anaaf waan haaraa miti, irra deddeebiidhaan kan namuudachaa turedha" jedha wallisaa Hacaaluu Hundeessaa.
"Taateen miilanaa kunis Irreecha Harsadii barii gaafa Wixataa naannoo Waajjira Gamtaa Afrikaa irraa jalqabanii konkolaataan na duuba deemanii na arrabsaatii naannoo addabaabayii Meeksikootti hokkora natti kaasani" jedheera mudannoo tibbanna Finfinneetti isa mudate ilaalchise.
Yeroo sanatti hiriyaasaa Guddisaa Dheeressaa waliin akka turee fi kan konkolaataan isa hordofaa turan namoota afur ta'uu hima.
"Jarri afur nuti lama buuneetuma dubbisna jenneeti garasaanii deemne."
"Maal gootaree yoo waa nama gootes rakkisaadha, callistee bira darbuuf ammoo jechi afaan isaanitii bahu nama hin dandeessisu ture" jechuun attamiin miira keessa galchanii booda himachuuf qophaa'uun hordofaa akka turan hima Hacaaluun.
"Maal eessaa namatti buuti, arrabarra jira wanti hundumtuu. Natti hin buune. Anumatu seerattan dhiheessa jedhee humnaan itti deeme. Rakkoonsaa immoo gaafa ati miira keessa galtee itti dhaqxemmoo sikadhatu nama nagaa sitti ta'uu barbaadu," jedha.
Namootni 'hokkora' itti kaasan kunneen, 'abbaa dabaree' nuun jechaa turan. Kana hundumaa bilisummaa hanga ittiin nama arrabsanii kana Dr. Abiyyitu kenneefi jedha.
"Finfinnee keessatti duraan nama Afaan Tigriffaa haasa'uu yoo argan warra fincaan itti dhufutu, amma garuu Oromoon yoo aangoo qabate kan isaan jalqaba eegan dabaree Oromoo kanattis Oromoo siqiqne jiraanna jedhanii waan eeganiif, Dr. Abiyyi akki itti dhufe akka isaan eegan waan hin taaneef Oromoof kabaja akka dhaban godhe," jedha Haacaaluun.
Madda suuraa, Margaa Angaasuu
"Ishee mudaa qabdus kaanis ni ida'amna kan jedhe Abiyyi malee Haacaaluu miti. Ani warra akkasii faana hidhata hin qabu,''
''Ani nama hin tuqu nan kabaja'' kan jedhu Haacaaluun, ''mirga kiyya kabachiisuuf garuu eenyurraayyuu heeyyama hin gaafadhu. Salphoon gaafa soqolatte soqolaan gargaara malee waanan ishiidhaa godhu hin qabu," jedha.
Dhumarratti erga waajjira poolisii naannoo Lagahaar geeffamaniin booda jarrichis balleessaa isaanii amanuus himeera. Ji'a tokko keessatti yeroo lama hokkora akkanaa narratti kaafameeras jedhe.
"Ka'umsi waan kanaa hundeensaa jibba Ormoodhaaf qabaniin. Jibbiinsa isaanii kanammoo akka fuulleetti baafatan kan godhe laafina mootummaati. Warri akkanaa kuni osoo ushururuun irraa dhaabbatee torban tokkotti seera eegdee jiraatti" jedha.
Gochi akkanaa kuni akka itti hin fufneef mootummaan warra akkanaa kana akeekkachiisee seera qabsiisuu baannaan sababa Kanaan waan uumamuuf jiru hagana jechuu hin danda'us jedhe.
"Wanti kuni uummata bira qaqqabnaan hamaadha. Uummanni keenya nurratti hin dhiisu. Waan barbaachisaa ta'e hunda ni godha. Garuu nutis mee har'a irra boru jenneetuma eeggachaa jirra malee wanticha gabaabumatti akka fala argatu gochuun inuma dandahama" jedha.
''Ce'umsatu gufata, hammachuu qabna inni jedhamus daangaa itti keenyee deemuu barbaachisaa ta'a'' jedha Haacaaluu.
"Hammachuuf jennee yoo ishiin mangaagaa jala nu dhiitte mataadhaan gadi gadhiisna malee hammachuun maalinni. Oromoon biyya abbaa isaa irratti kadhatee jiraachuu hin qabu. Oromoon kadhatees bulchuu hin qabu. Isaanis osoo carra argatanii kadhatanii hin bulchan" jedha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada
Itiyoo-Ertiraa: Hacaaluun simannaa Pireezidant Isaayyaas irratti 'ni geerara'
14 Adooleessa 2018
'Jaagamaa Badhaaneefaa nafaana karchallee Amboo ture' Hacaaluu Hundeessaa
Gahumsi waraana Itoophiyaa addunyaarraa 60ffaa, Afrikaa irraa 6ffaa ta'e
Taateewwan seenaan Tiraamp ittiin yaadatamu jaha
Daqiiqaa 16 dura
Tiraamp nagaa dhaammate, 'wanta hojjechuuf as dhufne hojjenneerra' jedhe
Fayyadamtoonni WhatsApp maaliif gara Telegram'tti geeddarataa jiru?
19 Amajjii 2021
Hir'ina daldalaa walqixxaachuu dadhabeefi qaala'insa sharafa alaa Itoophiyaaf maaltu fala?
15 Amajjii 2021
Shamarran Finfinneetti sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf hojjechaa jiran
17 Amajjii 2021
Sudaan naannoolee daangaa Itoophiyaarra 'balaliinsa xiyyaaraa dhorkite'
Duula Afaan Oromoo sirnaan dubbachuufi qubeessuu
13 Amajjii 2021
Muddama daangaa Itoophiyaafi Sudaan irratti dabalaa dhufe
14 Amajjii 2021
Haaliimaa Adeen, modeeliin beekamtuu hijaaba uffattu maaliif hojiishee dhiiste?
Waayee haleellaa Beenishaangul Gumuuz tibbanaa jiraattotni waan jedhan
Sirna muudama Joo Baayiden fi Kamaalaa Hariis irratti maaltu eegama?
Buufataaleen niwukilaraa Iraan ammallee maaliif haleellaaf saaxilamoo tahan?
Doonaald Tiraamp eenyu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Guraandhala 2020
Pireezidantii Ameerikaa 46ffaa ta'uun kan filataman Joo Baayidan eenyu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Sadaasa 2020
Tiraamp guyyaa isa dhumaa, Baayidan ammoo guyyaa isa jalqabaatti maal godhu?
Kooriyaan Kaabaa misaayilaa galaana keessaa dhukaafamu haaraa agarsiisaaf dhiyeessite